Yekupedzisira Email Kushambadzira Cheatsheet | Martech Zone
Yekupedzisira Email Kushambadzira Cheatsheet
Muvhuro, October 21, 2013 Muvhuro, October 21, 2013 Kelsey Washington
Kune akawanda mazano uye maitiro ekusarudza kubva paunenge uchifunga nezve yako nzira yeku e uye zvemukati kushambadzira. Vazhinji vepamusoro vanoita maemail vatengesi vanoita matekiniki akasarudzika senge zano, nguva, kuyedza, uye gadziriso rese dhizaini, asi nderipi zano rinopa mhinduro dzakanakisa? Ndezvipi zvaunofanira kutarisa pane imwe?
Nevavhareji vatambi vanoshandisa yakawanda yenguva yavo mukugadzira kwekusika (23%) vachipesana nevatambi vepamusoro vanopa yakawanda yenguva yavo yakazara kuronga (22%), zviri pachena kuti kuendesa kunogona kuve nebasa - kana kutopfuura - zvirimo iwe ' kupa zvakare.
Funga, semuenzaniso, kuti 72% yevashambadzi vese vanoyedza yavo maemail 'misoro yezvinyorwa vasati vatumira kune avo ekuparadzira zvinyorwa, nepo chete 15% vachiyedza maemail' mameseji marongero uye mufananidzo wekuratidzira. Tichifunga nezvekuti 75% yevaridzi vema smartphone "vanokwanisa" kudzima maemail avanotadza kuverenga zviri nyore pamafoni avo, kutadza kufunga nezve kubatsirwa kwekugadzirisa nhare kunogona kukonzera kurasikirwa kukuru mukati memushandirapamwe, kusataura kuyambuka zano rezve brand.
Ichi chingori chimwe chezvinhu zvakawanda zvekutarisa kana uchitsvaga kugadzirisa yako email kushambadzira mashandiro. Neraki, Marketo akaunganidza pamwe zvinobatsira ”email cheatsheet”Kwatiri kuti titaure netariro yekuvandudza nekugadzirisa nzira yedu yeemail:
Tags: Email MarketingKushambadzira Infographics
VevoCart: Yakazara Inoratidzwa ASP.NET Ecommerce Platform